ကြီးမြတ်သောအကြံဥာဏ်များသည်အရေးကြီးသည်မဟုတ် Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 2, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အကျဉ်းချုပ် ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ အခုတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတစ်နှစ်ကိုနှစ်ဆတိုးလာတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ သို့သော်၎င်းသည်စိတ်ကူးကြောင့်နှစ်ဆမဟုတ်ပါ။ Chris Baggott နှင့် Ali Sales တို့၏အကြံအစည်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောကြောင့်၎င်းသည်နှစ်ဆတိုးနေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Chris နှင့် Ali တို့၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ကွပ်မျက်မှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အကြံဥာဏ်များကိုလုပ်ငန်းခွင်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ်ယူဆောင်လာရာ၌အစဉ်အမြဲအောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း၊ ဦး စားပေးရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူရံဖန်ရံခါရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်ဘဲအသံကျယ်ဖြင့်အာရုံလွဲသွားသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမင်းကအာရုံပျံ့လွင့်သွားတယ်။ ငွေမပေးသော်လည်းအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ထားသည့်ဖောက်သည်များကအာရုံပျံ့လွင့်စေသည်။ သင့်အားတန်ဖိုးရှိသောဖွံ့ဖြိုးမှုအချိန်ကုန်ကျသော်လည်းသင်၏စီးပွားရေးကိုမတိုးတက်စေသည့်အင်္ဂါရပ်များကြောင့်အာရုံပျံ့လွင့်သွားသည်။ ငွေကြေးပြissuesနာများကြောင့်အာရုံပျံ့လွင့်ပြီး၊ သင်၏စီးပွားရေးထက်သူတို့၏အကျိုးကိုသာရှာဖွေနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအာရုံပျံ့လွင့်သည်။ တက်တိုင်းတာကြဘူးသောန်ထမ်းများကအာရုံ။ ဤအရာအားလုံးသည်သင်၏စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမှအာရုံလွဲသွားစေသည်။
ခရစ်နဲ့အလီကကျွန်တော့်ကိုစာအုပ်ထုတ်ပေးတဲ့အခါကျွန်တော့်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့စာအုပ်ဝယ်လိုက်တယ် DK New Media, ဘယ်လိုချမ်းသာရမလဲကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ကသူ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဝေမျှလိုက်သည်, ဖေလဇ်မင်း Dennis က။ သူကသင်စဉ်းစားနေသောစာအုပ်အမျိုးအစားမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဖေလဇ်မင်းမည်သို့ချမ်းသာလာကြောင်းနှင့်သူတစ်ပါးအပေါ်သူ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုအမှန်တကယ်လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီစာအုပ်ကိုသူကဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်နည်းနည်းလေးကဗျာပါပဲ။
အကြံဥာဏ်များလား။ ငါတို့ 'em' ရှိတယ်
ပိုက်ဆံလား ရုံ pester
ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံး, ဝိုင်နှင့်ကစားသောက်။
ကြီးကျယ်သောအကြံဥာဏ်များကိုသင်သူတို့မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကအရေးမကြီးပါ။ ဒီနေရာမှာ Indianapolis မှာမကောင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်များများကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြနိုင်ပေမယ့်ကုမ္ပဏီကစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းစွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံပြီးထောက်ပံ့ငွေတွေဒါမှမဟုတ်ရန်ပုံငွေတွေရခဲ့တယ်။ Hmmm … အမှုဆောင်ive = အမှုဆောင်င? အဲဒီမှာအမြီးအမောက်ရှိပါတယ်!
လာမည့်လများအတွင်းကျွန်ုပ်၏ပြက္ခဒိန်ကို ဦး စား ပေး၍ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုတိုးတက်စေရန်အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်။ DK New Media။ သေချာတာပေါ့ - ငါလာမယ့်အပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာယူပြီးကောင်းမွန်တဲ့လူနေမှုဘ ၀ ကိုရရှိနိုင်တယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ခါးစည်းအောက်တွင်ကန်ဒေါ်လာ ၂၅ K ကန်ထရိုက်များရရှိရန်၊ ကျွန်ုပ်၏ရေရှည်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရသောကျွန်ုပ်နှင့်မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်များဖြစ်စေရန် ပိုမို၍ ခက်ခဲသည်။
Tags: ခရစ်စမတ်cms iphone အက်ပ်မအောင်မြင်ခြင်းGitHubibm လိုဂိုSearch ကိုစျေးကွက်ဖြေရှင်းနည်း ၃၆၀
SEO အတွက်အောင်မြင်သော Blogging အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ၂၅
သြဂုတ် 3, 2009 မှာ 2: 49 AM
ငါစိတ်ကူးကောင်လေးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုသင်၏နာကျင်မှုကိုငါသိ၏။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ပွင့်လင်းပြီးအမြဲကူညီလိုသောဆန္ဒရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက် / အတွေးအခေါ်များကိုစွန့်လွှတ်။ တစ်နေ့တွင်မည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်၊ မည်သို့အမြတ်ထုတ်ရမည်ကိုသေချာသည်။ ငါနှစ်ခုအချက်များကနေဒီကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
၁။ ကျွန်ုပ်သည်အကြံဥာဏ်များပေးသည်။ သင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့သူတို့သည်၎င်းတို့ကို၎င်းကိုအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရန်လိုသည်။ လူအများစုကမလိုက်နာကြဘူး၊ လူအများအပြားအတွက်ရုန်းကန်နေရပုံရတယ်။
၂။ ကျွန်ုပ်သည်အကြံဥာဏ်နှင့်ဆည်ကို၎င်းတို့ယူမသွားပါက ၄ င်းတို့၏ရောင်းအားကိုနှစ်ဆတိုးမြှင့်ရန်အတွက်သာလုပ်ဆောင်ပါက၊ ငါဒီကနေတရားဝင်အမြတ်အစွန်းကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်အချို့သောကောင်းတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ဆောင်များနှင့်အက္ခရာများကိုလက်ခံရရှိပါပြီ။
ကောင်းသော post နှင့်ကံကောင်းပါစေ!